Ukubukeka komhlaba, ithuluzi lokuphatha Ubuntu | Kusuka kuLinux
I-Landscape, ithuluzi lokuphatha Ubuntu ngaphakathi
Emazweni isicelo esisizayo lawula y qapha imishini eminingi, ukwenza lula izakhiwo kanye izibuyekezo izinhlelo ngokufana.
Konke lokhu kusuka kokulula isikhombimsebenzisi sewebhu.
I-Landscape ayilona ithuluzi elitholakala kuwo wonke umuntu, kepha liyingxenye yezinsizakalo zokusekelwa ezinikezwa yiCanonical, inkampani ethuthukisa Ubuntu, njengengxenye yokubhaliselwa kwayo nemodeli yokusekela. Ngokwengxenye kunengqondo ngoba leli thuluzi lizosiza kakhulu inani elikhulu lamakhompyutha okufanele siwaphathe.
I-Landscape inezinguqulo ezimbili: i-Hosted Edition, etholakala ngeWebhu, kanye ne-Dedicated Server Edition, ongayifaka ngqo emshinini wakho. ICanonical njengamanje inikeza inguqulo yesivivinyo yezinsuku ezingama-60, kanye nezindleko zokubhaliselwa kwe-Landscape iyunithi ngayinye ngonyaka.
1 Ukuphathwa kokuvuselelwa kwemishini
2 Ukuqapha Izinsiza kusebenza
Ukuphathwa kokuvuselelwa kwemishini
Ubuhle obukhulu be-Landscape ukuthi busivumela ukuthi siphathe izibuyekezo okufanele sizethule emaqenjini asebenza no-Ubuntu kunethiwekhi yethu. Ngale ndlela singavuma ukusatshalaliswa kwephakeji yesoftware elizosatshalaliswa emaqenjini ngokushesha. Enye indlela ukuyenqaba noma ukuyibamba. Kunoma ikuphi i-Landscape isivumela ukuthi sibuyele emuva futhi sisuse iphakheji efakiwe.
Ngaphezu kokuvuselelwa, i-Landscape ikuvumela ukuthi ube ne-software ne-hardware yemishini yenkampani, ngisho nalezo ezingakwazi ukuxhuma ngezikhathi ezithile, njengama-laptops, kanye nemishini esinayo efwini le-Ubuntu, okuthile okwengeza ukuguquguquka leli thuluzi.
Ukuqapha Izinsiza kusebenza
Ngaphandle kokulawula uhlelo nezibuyekezo zesoftware, i-Landscape ivumela ukuqapha kwemingcele yemishini eminingi. Sebenzisa i-ejenti efakwe kumakhompyutha ukuqoqa imininingwane ngesikhathi sangempela. Idatha yokusebenza ibhekwa imojuli yokuqhafaza emele okuguquguqukayo okufana namathrendi wethempelesha, inkumbulo nokusetshenziswa kwediski, ukulayishwa kwesistimu, noma amamethrikhi angokwezifiso.
Lolu lwazi lubaluleke kakhulu kuma-sysadmins futhi lungasiza kakhulu. Ngaphezu kokuba usizo olukhulu ekucwaningweni kwezokuphepha kwemishini esinayo kwinethiwekhi.
Konke lokhu kulawulwa nge-interface yewebhu, ngakho-ke akukho lutho oludinga ukufakwa. Noma kunjalo, kukhona amathuba okufaka i-Landscape kuseva ezinikezele. Inzuzo ayifanele ukufinyelela ekhasini lewebhu, ngegama lomsebenzisi nephasiwedi yethu. Inketho yezinkampani ezifuna ukugcina yonke into ilawulwa.
Ngamafuphi, kungenye indlela esisinikeza imbuyiselo kutshalomali, ikakhulukazi ekuthuthukiseni umkhiqizo ekuphatheni imishini. Ngalesi sizathu, njengoba inani lamakhompyutha enkampanini landa, kuzoba nenzuzo enkulu ukwengeza ukubhaliswa kokuxhaswa kweCanonical enkampanini yethu.
Imininingwane engaphezulu: Emazweni
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » I-Landscape, ithuluzi lokuphatha Ubuntu ngaphakathi
Uma unemali yokuyikhokha i-Landscape rox kodwa uma kungenjalo i-Landscape imunca i-XD
I-HowTo: Insiza ye-FTP isebenzisa i-database ye-MySQL
Yabelana ngezithombe zakho kalula noGwenview noKSnapShot